Abavelisi beengxowa ezipholileyo, abaXhasi - China Isingxobo seengxowa ezipholileyo
Ukutya okuPhezulu okuPhezulu okuPhezulu
Ukutya okupholileyo kweebhegi kukhulu kakhulu, oko kuthetha ukuba kukho indawo eyoneleyo yokutya kunye neekeyiki, kwaye ugcine indawo engakumbi kuyo yonke iivenkile okanye izinto zokuhanjiswa kokutya. Ibhegi yokuhambisa ukutya kwe-pizza yomelele kwaye yakhelwe ukuphatha imithwalo enzima.
Non womluki kupholile Lunch Bag
Ibhegi epholileyo, ibhegi enobushushu obuphezulu bokugquma kunye nefuthe eliqhubekayo, elilungele abo bathanda ukuhamba. Kukulungele ukukuphatha, ke lolona khetho lukhethekileyo kubasebenzi baseofisini nakwabafundi. Ibhegi epholileyo inokugcina incasa yesidlo ngasinye.